Chii chinonzi Routing? - Tsanangudzo yeRouting | Networking
Tsanangudzo yekudzosa: Mukushanda kwekambani, nzira yekuendesa pakiti yepazivo kubva kune chinangwa kusvika kune chinangwa. #hwokutiparadza inowanzoitwa negadget yakaitwa inonzi switch. Kuendesa mberi chinhu chinokosha cheIndaneti sezvo inopa mharidzo kuenda kunotanga neCP imwe ndokuenda kune inotevera uye pakupedzisira kuzadzisa chinangwa chemichina. Munhu wese wepakati PC anotora nzira kuburikidza nekuenderera mberi neshoko kune PC inotevera. Chimwe chikamu chemuitiro uyu chinosanganisira kuongorora purogiramu yekugadzirisa kusarudza nzira yakanakisisa.
Kuendesa mberi kunowanzokanganiswa nekukomberedza, iyo inoita basa rinoenzanisa. Kusiyana kukuru pakati pezviviri ndechokuti kukwidza kunoitika panzvimbo yakaderera uye inowedzera kusvika kune imwe yezvigadziri zvinoshandiswa kunyange zvazvo kuenderera mberi kunoitika pane imwe nzvimbo yakakwirira apo chikamu chechikamu chinonyanya kukosha. Uyezve, pane zvikonzero kuti kugadzirisa kunowanzoitika muhomwe yakawanda, inogona kuita kuongororwa kwakawedzerwa kunetseka kusarudza nzira yakakodzera yepakiti.
Kudzidzisa Kukodzera MuDhijitori Yenyika Yenyu